Ihe Google enweghị ike ịchọta | Site na Linux
Ihe Google enweghi ike ihu
Nke a bụ ihe osise dị ọchị nke m hụtara na blọgụ ole na ole m gụrụ.
Isi: Linux Paradaịs
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Ihe Google enweghi ike ihu
Achọtara m wally.
Ha niile na-arụ ọrụ. Enwere m nchegbu banyere nke a:
Echere m na ịchọ mgbidi-e bụ nke a:
Enwere m ahapụ onyonyo ahụ na nnọkọ ahụ ka ha wee chọọ ya, n'ihi na ọbụnadị google enweghị ike ịchọta ya.
Ọ dị ezigbo mma! xD
G TN T NA-EME GLỌ EmoZ?
Enweghị m ihe ọ bụla, kpamkpam, ebe ọ bụ na amaghị m onye ọ bụla n'ime ha, enweghị m ike ịkọ ma ọ bụrụ na ha bụ ịnyịnya ibu ma ọ bụ na ọ bụghị. Site na ihe m gụrụ, ee, mana hey, anaghị m akwado ya.
Ihe m nwere bu ihe megide Hoygans haha ​​ọ na - ewe m iwe na pringaos ndị ahụ niile na - ede otu ahụ.
"Ke ezKriban Azi", ndị chọrọ imerụ ahụ, ndị na-akpụ ntutu isi ha dị ka ndị nwere mmasị na otu nwoke ma na-enye mmadụ onyonyo ọjọọ, mana ihe enwere ike ịme, nke ahụ bụ ụwa na-aga
Eeh, nke ahụ kwuru mana amaghị m onye ọbụla m maara n'ezie
Na Sonora, Mexico, ebe m si, anyị na-akpọ ha moxxos, ọ bụghị hoygans hahahaha mana ee, ọ na-amị amị nke ọma na ha dee otu ahụ, yana ọ na-enye m nsogbu karịa na ha na-ede karịa m 🙁
Ọ bụrụ na ịnwetaghị ya ...
Nke a bụ egwuregwu e mere, ọ bụghị ezigbo, n'ihi na ọkụkọ ọ bụla i tinyere na Google, nsonaazụ ga-apụta.
Otu nke m tinyere adighi enye nsonaazụ (belụsọ ma i wepu ego ruturu ya).
Ma ọ bụrụ na m nụchaa ọbụna nke ahụ:
Anyi echetakwala obi ike nke nsogbu ahu, cheta: draịvụ ike na-adịghị mma ... xD
50 dị ọnụ ala karịa nke m hụrụ… Ọ bụrụ na achọta nke m pere mpe, m ga-eyi ya.
@Courage, jiri eriri USB mgbe ị na-echekwa 😛.
Enweghị m ma, naanị nke m nwere, achọrọ m ya zuru oke maka klaasị akwụkwọ ahụike
Hahahaha ezigbo mma Obi ike
Nwanyị nwanyị maka KZKG ^ Gaara, hahahaha. 😀
Ka ogbenye daa mba ya xD
Ezigbo mma ... nke emos na deputies bụ eziokwu a na-apụghị ịgbanwe agbanwe nke physics.
Hahaha candela ihe ha choro na google, mana gịnị kpatara na ha achọghị ihe dị mfe ịchọta dịka "Ubuntu ka Debian mma"
Onweghi nwoke, ya mere ubunto zoro n'ime m ma m ga-ano na ụtarị xD
Chọọ maka "Ubuntoso impartial" ma ọ bụ "Ubuntoso tolerant" ma gwa m ma ị nweta nsonaazụ ọ bụla.
Hahaha, dị ịrịba ama!
nke ikpeazu mere m ihe ochi
Ndị "nnọchite anya ọrụ" ... Ezigbo.
Enwere m nkọwa ka mma maka "ọchịchị" karịa nke "ezigbo ụlọ akwụkwọ."
Ọchịchị: Ohu na-ekwesị ntụkwasị obi nke usoro ego yana nke ọdịmma ya.
Ihe ndị ọzọ, blah blah blah ...
Ọ na-echetara m ọtụtụ peeji njehie 404 ahụ: ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ọrụ na ezigbo ụgwọ ... M na-apụ na bọtịnụ m ga-enwe obi ụtọ. Ugbu a ọ na-aga n'ihu ịpụta na ọnọdụ mbụ 😛 http://www.noseencuentra.com/trabajo404.htm
Ndepụta zuru ezu nke ibe 404 nke ndị a: http://www.noseencuentra.com/index.htm
emeela nke ọma ma bụrụ eziokwu, ọ bụrụ na ị dee agba ụfọdụ agaghị egosi gị nhọrọ (ndị na - egosi mgbe ị na - ede ihe ma ịpughi "ọchụchọ"), ma ọ bụ na - akpọ iyi, ụfọdụ ndị ọrụ mepụtara nhọrọ ịchọrọ ịchọ ọtụtụ puku oge mana site na igbanwe leta, onye n’acho choro igafe dika onye nso ka aghogburu. Nke a gosiri na Google nwere ụdọ gburugburu olu ya maka ndị na-akwado ya na ndị na-akatọ ya.
O nwebeghi ike igbochi okwu ndị dị ka: nwoke nwere mmasị nwoke ọchịchị aka ike na ndị ọzọ nwere nkọwa, n'ihi na ọ ga-emegide echiche niile na ikike iji were ya dị ka mma ma ọ bụghị mkparị n'onwe ya.
Akpọkwara m ya asị na ọ na-emegharị gị gaa na nsụgharị ebe ị nọ ma ọ dịghị achọ naanị na .com na ihe ọ bụla ọzọ. Ka o sina dị, ọ bụ igwe nyocha kachasị mma ọbụlagodi na ọ naghị eji chrome ya, ọ dịkwa arụ na ịchọrọ itinye akaụntụ gị niile dịka YouTube blog na ndị ọzọ n'otu
Zaghachi ka torgek
Hahaha, magburu onwe ya!
E nwere Xfce 4.10pre2 + Ntinye
KISS, ihe kachasị m maara